Halatra taova :: Roa lahy nahatrarana voamaso efatra • AoRaha
Halatra taova Roa lahy nahatrarana voamaso efatra
Nosamborina avy hatrany ny lehilahy roa nahatrarana voamaso efatra, tany Andrea ambanivohitr’i Maintirano, tamin’ny alakamisy lasa teo. Novitaina haingana ny famotorana azy ireo ka naiditra am-ponja vonjimaika izy roa lahy, taorian’izay.
Mitohy ny fanadihadiana sy fikarohana lalina hahafantarana an’ireo mety mpiray tsikombakomba tamin’izao resaka halatra maso izao. Naharay fanairana avy tamin’ny olon-tsotra ny polisy, avy ao amin’ny Hery Vonjy taitran’ny Polisim-pirenena (FIP), any Maintirano momba ny tranga hafahafa sy halatra voamaso. Tonga tany an-toerana ireo mpitandro filaminana. Tratra tokoa ny lehilahy telo voarohirohy. “Ao anaty tsiambaratelon’ny famotorana ny mikasika ny zava-nisy sy ireo niharamboina lasibatra.
Nomena ny mpitsabo afaka mikarakara azy kosa ireo voamaso”, araka ny fanampim-baovao fohy avy amin’ny polisy any Maintirano. Voalaza fa efa malaza, tao anatin’ny roa volana izao, ny resaka halatra maso any amin’iny distrikan’i Maintirano iny.
Famonoana zaza :: Olona enina samy nogadraina